DAAWO SAWIRRO: Goobtii qaraxa uu ka dhacay ee KMO – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTADAAWO SAWIRRO: Goobtii qaraxa uu ka dhacay ee KMO
DAAWO SAWIRRO: Goobtii qaraxa uu ka dhacay ee KMO
Bur bur aad u xoogan ayaa ka muuqdo goobtii xalay uu qaraxa ka dhacay ee Isgoyska Jubba, meel ku dhaw Hotelka Dorpin ee Magaalada Muqdisho.
Dad badan oo shacab ah ayaa ku dhintay qaraxaasi, waana meesha dowladda ay sheegtay khasaaraha ugu badan ee shacabka inuu ka dhashay, maadaama dad badan halkaasi ay maraayeen.
Wasiirka amniga Somaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) ayaa sheegay dad shacab ah oo qaarkood ka yimid dhanka Liido ,kuwaasi oo goobta qaraxa ka dhacay maraayay xilliga ay wax dhacayeen.
Suxufiyiinta oo saaka booqday goobtii ay wax ka dhaceen ayaa waxa ay soo arkeen bur burka dhismayaal badan oo qaraxa uu saameeyay, maadaama qaraxa gaariga loo adeegsaday uu ahaa mid culus.
Si rasmi ah looma oga inta uu la eeg yahay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay gaariga ku qarxay nawaaxiga Isgoyska KM0, balse dowladda waxa ay sheegtay dad badan oo rayid ah inay halkaasi kud hinteen.
DEG DEG:-Doorashada Kursi Ka Banaan Golaha Shacabka Oo Ka Bilaabatay Muqdisho
41,686 total views, 2,439 views today
41,686 total views, 2,439 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
41,758 total views, 2,438 views today
41,758 total views, 2,438 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
41,770 total views, 2,438 views today
41,770 total views, 2,438 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
41,794 total views, 2,438 views today
41,794 total views, 2,438 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
41,822 total views, 2,435 views today
41,822 total views, 2,435 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]